Waa sidee natiijooyinka ay Atletico Madrid, Real Madrid iyo Barcelona u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan La Liga kaddib kulammadii 35-aad ee barbarraha ku wada idlaaday? – Gool FM
Waa sidee natiijooyinka ay Atletico Madrid, Real Madrid iyo Barcelona u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan La Liga kaddib kulammadii 35-aad ee barbarraha ku wada idlaaday?
Ahmed Nur May 10, 2021
(Madrid) 10 Maajo 2021. Afarta koox ee ugu sarreysa La Liga ayaa toddobaadkii 35-aad ee ciyaaraha horyaalka dalka Spain ku dhammeystay barbarro kaddib markii ay Sabtidii isku garbo dheceen kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid halka xalayna barbarro 2-2 ah ay ku kala tageen Real Madrid iyo Sevilla.
Los Blancos ayaa xalay lumisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka La Liga maadaama haddii ay isku dhibco noqdaan hoggaamiyaasha ay kooxda Macallin Zinedine Zidane ku sarreyn doonto natiijooyinkii kulammada fool-ka-foolka ahaa ee xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, rajada Barca ee ku guuleysiga horyaalka ayaa ah mid hoos u dhacday, waxaana loollankiisa haatan si adag ugu hardamaya kooxaha caasimadda ka wada dhisan, sidaas darteed, maadaama ay kooxda Macallin Diego Simeone hoggaanka heyso sidoo kalena ay kulammada u harsan haddii ay wada guuleysato ay qaadi doonto La Liga, waxaan eegeynaa natiijooyinka Real Madrid ay u baahan tahay si ay horyaalka u difaacato.
Sida haatan loo kala sarreeyo
Atletico Madrid ayaa hoggaanka ku heysa 77 dhibcood, waxayna labo dhibcood ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Real Madrid oo leh 75 dhibcood sidoo kalena dhibcaha wadaagaan Barcelona, hase ahaatee, Barca ayaa booska saddexaad ku jirta natiijooyinkii fool-ka-foolka maadaama Madrid ay wada adkaatay labadii ciyaarood ee El Classico, waxaana booska afaraad iska soo guurguuranaya Sevilla oo leh 71 dhibcood kana hooseysa hoggaamiyeyaasha lix dhibcood.
Sida ay Atletico Madrid ku qaadi karto
Naadiga lagu naaneyso Los Rojiblancos ayaa heysata saddex kulan oo ay labo ka mid ah ku ciyaari doonto garoonkeeda, waxayna u baahan tahay inay dhammaan wada guuleysato saddexda ciyaarood taasoo si toos ah ay ugu guuleysan karto La Liga xitaa haddii ay kooxaha kusoo xiga wada guuleystaan kulammada u harsan.
Haddii ay barbarro gasho, isla markaasna ay Real Madrid dhibco lumiso, wali waa ay qaadi kartaa horyaalka.
Sida ay Real Madrid ku qaadi karto
Los Blancos ayaa u baahan inay wada adkaato dhammaan saddexda kulan ee u harsan sidoo kalena hal guuldarro ay ku dhacdo Atletico ama ay barbarro gasho labo ka mid ah saddexda kulan ee u harsan.
Haddii ay Madrid hal kulan dhibco lumiso waxaa duugmi doona rajadooda hanashada La Liga.
Dhanka kale haddii ay labada koox ku dhammeystaan dhibco isku mid ah, kooxda Zinedine Zidane uu hoggaamiyo ayaa difaacan doonta La Liga maadaama la xisaabin doono kulammadii is aragga labada koox halkaas oo ay Real ka heshay afar dhibcood maadaama ay 2-0 ku adkaatay ciyaartii Alfredo Di Stefano sidoo kalena ay barbarro heshay ciyaartii Wanda Metropolitano.
Barcelona rajadeeda aad ayay u hooseysaa marka loo barbardhigo labada Madrid, sidaas oo ay tahay xisaabta waa ay ku jirtaa, waxaana haddii ay wada guuleysato saddexda kulan ee u harsan ay heli doontaa 84 dhibcood, waxaana ay u baahnaan doontaa in Atletico Madrid ay lumiso saddex dhibcood ama wax ka badan, oo ka dhigan hal guul darro oo soo gaarta hoggaamiyeyaasha ama inay labo barbarro gasho Atletico oo ay sidaas ku lumiso afar dhibcood.
Kaliya natiijada Atletico caqabad kuma ahan Barca, waxay sidoo kale u baahan tahay inay Real iyaduna ay lumiso dhibco xitaa ugu yaraan hal barbarro oo kale inay gasho saddexda kulan ee harsan, maadaama haddey isku dhibco noqdaan Real Madrid iyo Barcelona ay marwalba sarreyn doonto Madrid inta ka dhimman xilli ciyaareedkan.
Kulammada u harsan saddexda sare
Atlético: Real Sociedad (Guri), Osasuna (Bannaan), Valladolid (Guri)
Barcelona: Levante (Bannaan), Celta (Guri), Eibar (Bannaan)
Real Madrid: Granada (Bannaan), Athletic (Bannaan), Villarreal (Guri)
Kooxaha Real Madrid iyo Sevilla oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Alfredo Di Stefano… +SAWIRRO
Andrea Pirlo oo la weydiiyay inuu iska casilayo shaqada kooxda Juventus kaddib guuldarradii Milan iyo jawaabtii uu bixiyay oo...